ONLF: Hubka ma dhigayno…” | Berberanews.com
Home WARARKA ONLF: Hubka ma dhigayno…”
ONLF: Hubka ma dhigayno…”
Hoggaanka Warfaafinta ONLF Maxamed Ibraahim oo war saxafadeed amuurtan ku saabsan oo ay jabhadda soo saartay akhriyey ayaa wuxuu sheegay “wadahadalladii iyo heshiiski Jabhadda ONLF iyo Dowladda Itoobiya ay wada galen inuu ka mid ahaa in ciidamada Jabhaddu ay ka mid noqdaan ciidamada amniga ee deegaanka”.
“Ciidamada Jabhadda iyo kuwa deegaanka sababta loo mideynayana ay tahay si nabadda iyo xasiloonida dalka loo wada ilaaliyo.”
Jabhadda oo ay ka go’an tahay meel marinta heshiiska ay la gashay dowladda Itoobiya mideynta ciidamadana waxaa ku howlan ayuu yiri “guddi isku dhaf ah laguna wado hab wada tashi ah lagana ilaaliyo wax kasta oo meel marinta heshiiskaasi wax u dhimayo”.
Ku xigenka H/Abaabulka iyo Arrimaha Gudaha Ibraahim Maxamed Amaan wuxuu sheegay “war saxafadeedkan inuu ka ka dhashay shir ay guddiga fulinta iyo golaha dhexe ee Jabhadda ONLF oo ka dhacay magaalada Jigjiga oo lagu falanqeeynayey qodob ka mid ah qodobbada heshiiska ay Jabhaddu la gashay dowladda Itoobiya oo ah qodobka Ciidamada”.
Ku xigeenka H/Daryeel ee jabhadda ONLF C/raxmaan Yuusuf Faarax oo ka mid ahaa xubnihi shirka jaraa’id soo jeediyey ayaa wuxuu sheegay “Umaddu iney mareyso xalaad xasaasi ah loogana gudbi karo umadda xooggeeda iyo xoolaheeda oo la mideeyo waxaan ka codsaneynaa cid kasta oo ay khuseyso arrintaa iyada ihii iney doorkeeda ka qaadato si umadda dhibka ay soo martay iyo wixi laga soo gudbay looga booga dhayo”
Caddaani Hirmooge oo ah afhayeenka ONLF ayaa wuxuu sheegay “heshiis iyo is-afgarasha kasta oo dhacda iney ururka ONLF uu amarnaba ka tanaasuleyn hadafkii ayaa-ka-talinta ee ay ONLF muddo u soo halgameysay”.
Qodobka ugu weyn wuxuu ahaa xabbad joojin, taasoo ay ONLF dhankeeda kaga dhawaaqday dhowr bilood ka hor, Itoobiyana ay sidaa kaga saartay “Liiska ururrada argagixisada ah”.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee ONLF, Axmed-Yaasiin Sheekh Ibraahim, wuxuu BBC u sheegay in ay ku heshiiyeen in “ONLF ay hawlaheeda si nabdoon u sii wadato”. Wuxuu intaa ku daray in la isku afgartay in wadahadallada la sii wado.
Arrin middaas u dhow waxaa qaba C/raxmaan Ismaaciil Cadami oo ka faallooda arrimaha gobolka. Wuxuu ku tilmaamay heshiiska “mid hordhac ah, sida in colaadda la joojiyo iyo in wadahadallada la sii wado”.
Cabdiraxmaan wuxuu ku tilmaamay heshiiskaas mid aan la oran karin “waa heshiis rasmi ah”.
Sideey u arkaan qabaa’ilka kale ee ku nool kililka?
“Arrinta masiirka qudheeda, qabiil ka mid ah qabaa’ilka Soomaalida Itoobiya ugama haysto ogolaansho qabaa’ilka kale inuu magacooda dawladda wadaxaajood kula galo”.
Haddaba mar haddii uusan ONLF wakiil ka noqon karin Soomaalidii kale ma loo arki karaa wax iska maaweelo ah wadahadalka ay dawladda isla wadaan ee looga hadlayo in afti madaxbanaani laga qaado malaayiinta qof ee Soomaalida ah ee ku nool dawlad deegaanka? Mar kale Cadami ayaa ku jawaabay:
“Ragga hadda dawladda Itoobiya gorgortanka kula jira hal qabiil ayey ka kooban yihiin. Mar haddii aysan qabaa’ilkii kale soo igman waxaan u arkaa inay tahay ‘cadaadis iyo wax ku gooso’ ayuu yiri Cadami.
Previous articleBerbera oo lagu qabatay Carwo lagu soo bandhigay waxyaabaha dumarku isku qurxiyo oo dabiici ah
Next articleDawladda Hoose ee Berbera oo dhagax-dhigtay waddo cusub